Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Neck Lumps လည်ပင်း အလုံးအကျိတ်
ကျွန်တော့် သားလေးက (၆)နှစ်ရှိပါပြီ။ သူ့အသက် (၅) နှစ်လောက်မှာ လည်ပင်းရဲ့ညာဖက် အပေါ်နား ချိုင့်ခွက်လေးထဲမှာ ရုတ်ချည်း ထိခိုက်မှု တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ ဖေါင်းလာပါတယ်။ ဖြစ်စမှာ အပေါ်ယံက စိမ်းနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးမှာ နာတာ ကျင်တာတော့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ စိတ်ပူတာနဲ့ ကလေးအထူးကုတွေနဲ့ ပြတော့ အရည်အိတ် (သို့) သွေးကြောထုံးတယ် ပြောပါတယ်။
ဆေးသောက်လို့ ပျောက်မှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ခွဲစိတ်ရမယ် ပြောတာနဲ့ ကလေးခွဲစိတ် ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ ပြခဲ့ပါတယ်။ သွေးစစ် ဓါတ်မှန်ရိုက်တော့ အဆုတ် မကောင်းဘူး (ဓါတ်မှန်အရ) ဆိုပြီး၊ အဆုတ်ဆေး ကျွေးပြီး ကောင်းမှခွဲကြတာပေါ့ ဆိုတာနဲ့ (ခွဲစိတ်တဲ့အခါ ကလေးမှာ အဆုတ် မကောင်းရင် တစ်ခြား ကိစ္စတွေ) ပါလာမှာ စိုးလို့ ဆိုပြီး ရှင်းပြပါတယ်။ ဆေးကျွေးလို့ (၆) လပြည့်တော့ ကလေး အထူးကု ဆရာဝန်က ဓါတ်မှန် ကြည့်ပြီး၊ ရပြီ ခွဲစိတ် ဆရာဝန်ကြီး ဆီသွားပြန်ပြပါဆိုလို့ ပြန်ပြတော့လဲ ဓါတ်မှန် ကြည့်ပြီး အဆုတ်ကို မကြိုက်တာနဲ့ တစ်ခါ အဆုတ်ဆေး ကျွေးဖို့ ပြောလာတာနဲ့ ဆေးက ငယ်စဉ်ကတစ်ခါ၊ ခုတစ်ခါ ဆိုတော့ နှစ်ခါဖြစ်နေတာနဲ့ မကျွေးတော့ဘူးဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုနေရင်းကနေ နေ့စဉ်တော့ ကြည့်နေတာပါ။ တစ်နေ့ ရေချိုးရင်း ကြည့်တော့ အဲဒီအဖုလေး ဆိုပေမယ့် တော်တော်လေး ဖောင်းတက်နေတာပါ။ အဲဒီအဖုလေး မရှိတော့တာ တွေ့ရလို့ မိသားစုလည်း တော်တော်ကို ဝမ်းသာသွားပါတယ်။ အဲဒီရက်မှာ ထူးခြားတာဆိုလို့ သူ့အဖွားနဲ့ လမ်းလျှောက် လိုက်တယ် လက်ကို လွှဲလျှောက်တယ်။ နောက်ပြီး ကျောပိုးအိတ် မလွယ်ဘဲ ဘေးလွယ်အိတ်ကို ပြောင်းလွယ်ဖြစ်တယ်။ သိချင်တာက (၁) ခုပျောက်သွားတာ နောက်ပြန်ဖြစ်လာတာလား။ (၂) ဘာလို့ ဒီလိုမျိုး ချက်ခြင်း ဖြစ်လာပြီး ဘာလို့ ချက်ခြင်းဆိုသလို ပြန်ပျောက်သွားတာလဲ ဆိုတာပါ။ ကလေးကတော့ ကျန်းမာပါတယ်။
လည်ပင်းမှာ အလုံး-အကျိတ်ပေါ်တာ မကြာခဏ တွေ့ရရတတ်ပါတယ်။ ငယ်သူနဲ့ ရွယ်သူတွေမှာ အဖြစ်များကြတယ်။ ဖြစ်နိုင်တဲ့ရောဂါတွေ စာရင်းချပါမယ်။
29. Thyroglossal cyst မွေးရာပါ လည်ပင်းကြီး-အကျိတ်-အိတ်၊
30. Thyroid cancer လည်ပင်းကြီး-ကင်ဆာ၊
31. Thyroid nodule လည်ပင်းကြီး ကင်ဆာမဟုတ် အကျိတ်၊
33. Tuberculosis တီဘီ-အကျိတ်၊
Neck Lumps and Bumps အများအားဖြင့် ကင်ဆာမဟုတ်-အကျိတ်တွေ ဖြစ်တယ်။ Malignancy ကင်ဆာနဲ့ Chronic infection နာတာရှည် ပိုးဝင်တာတွေကနေ ဆက်ဖြစ်တာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ရက်သတ္တ ၃ ပါတ်ထက် စောတာတွေဟာ သူ့အလိုလို သက်သာ ပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ ရောဂါပိုးဝင်တာ ဖြစ်မယ်။ ၄ ပါတ်မှ မပျောက်ရင် ဆရာဝန်ပြပါ။
အလုံး-အကျိတ်-အနာ မှန်သမျှ စမ်းသပ်တဲ့အခါ မျက်စိနဲ့ စရပြီး၊ လက်နဲ့ အသေအခြော စမ်းရပါတယ်။ နေရာ၊ အရောင်၊ အရွယ်အစား၊ ပုံသဏ္ဌာန်၊ အပျော့-အမာ၊ အပူ-အအေး၊ ရွေ့ရ-မရ၊ နာ-မနာ ဆိုတာတွေ သိအောင် လုပ်ရပါတယ်။
နေရာဆိုတာမှာ သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ တိတိကျကျ သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း ရေးမှတ်ရတယ်။ ဆေးပညာ သင်သူတွေသာ လိုအပ်တာမို့ မရေးတော့ပါ။ မေးတဲ့သူ ရေးသလို “လည်ပင်းရဲ့ ညာဖက် အပေါ်ချိုင့်ခွက်လေးထဲမှာ” ဆိုတာ အတော် သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ “လည်ပင်း အောက်ခြေ၊ ညာဘက်ခြမ်း၊ ညှပ်ရိုးရဲ့ အလယ်-အရင်း-အဖျား အထက်နား၊ လက်သန်း တလုံးလောက်မှာ” လို့ ဆိုရင် ပိုတိကျလာမယ်။ ဘဲဥပုံ၊ လူကြီးလက်မ တဆစ်လောက်၊ ခပ်မာမာ ဆိုတာပါ ထပ်ဖြည့်ရင် ဆရာဝန်မျက်စိထဲ ပိုမြင်လာနိုင်တယ်။
• အလုံးဟာ အရေပြားနဲ့ တဆက်ထဲ၊ အရေပြားထဲမှာဆိုရင် Sebaceous cyst ချွေးထွက်အိတ်-အကျိတ် နဲ့ Lipoma အဆီ-အကျိတ် ဖြစ်နိုင်တယ်။
• အလုံးက အလယ်တည့်တည့်လောက်မှာ ပါးစပ်က မျိုတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် လျှာထုတ်လို့ အလုံးက ရွေ့လာရင် မွေးရာပါ လည်ပင်ကြီးအိတ်နဲ့ လျှာဆက်နေတဲ့ပြွန် Thyroglossal duct ဖြစ်နိုင်တယ်။ အထဲမှာ အရည်ရှိမယ်။ ပိုးမဝင်ရင် အနာဘူး။
• Lymph nodes တက်စေ့ရောင်တာ အတော်များများဖြစ်ကြတယ်။ နဲနဲနာမယ်၊ မာတင်းတင်း ရာဘာလိုနေမယ်၊ ကိုင်ပြီး ရွေ့ရင် ရချင်ရမယ်၊ မရတာလဲရှိမယ်။ တက်စေ့ တွေ့ရင် ပါးစပ်၊ တံတွေးထွက်အိတ်တွေ ဆက်စစ်ပါ။ ကင်ဆာ၊ အနာ ရှာပါ။
• ကလေးတွေဆိုရင် အာသီးရောင်ဘူတာမေးပါ။ မျက်နှာ-လည်ပင်း အနာဖြစ်ဘူးသလား။
• လည်ပင်းကြီး-အကျိတ်ဆိုရင် မျိုးချခိုင်းတော့ အထက်-အောက် ရွေ့လိမ့်မယ်။
• Dermoid cyst ဆိုတာ အရေပြားမှာ အိတ်လေးနဲ့အကျိတ်၊ ခွဲရင် အထဲမှာ အမွှေးလို၊ ချွေးလိုပါနေတာတွေ့မယ်။
• မေးရိုးအောက်နား အကျိတ်တွေက လူကြီးဆိုရင် မာပြီး၊ မနာရင် ကင်ဆာ၊ လူငယ်-ကလေးတွေဆိုရင် တီဘီ၊ (အင်ဖက်ရှင်)၊ Salivary calculus တံတွေးထွက်လမ်း-ကျောက် စတာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• မျိုချခိုင်းလို့ မရွေ့တာက Salivary gland swelling တံတွေးထွက်အိတ်၊ Branchial cyst မွေးရာပါ (ဘရန်ခီရယ်) အိတ်၊ Cystic hygroma မွေးရာပါ (ဆစ်စတစ်-ဟိုက်ဂရိုးမား) အလုံး၊ Carotid aneurysm (ကရောတစ်) သွေးလွှတ်ကြော ဖေါင်းတာ၊ Carotid body tumour (ကရောတစ်) အကျိတ်၊ Sternomastoid tumour (စတာနို-မတ်စရွိုက်) ကြွက်သားအလုံး (မွေးတုံးက ထိခိုက်မိတာ)၊ Laryngocoele လေပြွန်အိတ် (လေမှုတ်ရင် ပိုဖေါင်းတာမယ်)၊
• အကျိတ်တခုမက တွေ့တာဆိုရင် TB တီဘီ၊ Glandular fever အကျိတ်ရောင်အဖျား၊ HIV (အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ)၊ Lymphoma (လင်ဖိုးမား-တက်စေ့ကင်ဆာ) Metastases တနေရာမှာ ကင်ဆာဖြစ်လို့ ပြန့်လာတာ တခုခု စဉ်းစားပါ။ တခြားနေရာက တက်စေ့တွေလည်း စစ်ဆေးပါ။ ဥပမာ ချိုင်း၊ ဘေလုံး၊ အသဲ၊
• Cervical rib မွေးရာပါ လည်ပင်းနံရိုး၊
• Subclavian artery aneurysm လည်ပင်း (ဆပ်ဖ်ကလေးဗီးယမ်း) သွေးလွှတ်ကြော ဖေါင်းတာ၊
• Pharyngeal pouch မွေးရာပါ (ဖရင်ဂျီရယ်-ပေါက်ခ်ျ)၊
ဒီတော့ ဖြစ်နိုင်တာတွေထဲက တခုချင်း ဖယ်ထုတ်နည်းနဲ့ စကာတင်းရွေးရမယ်။ လိုသေးတဲ့ စမ်းသပ် စစ်ဆေးတာတွေ လုပ်ရလိမ့်မယ်။ တခြား ကျန်းမာရေး အခြေအနေတွေလည်း ကြည့်ရမယ်။ အလေးချိန်ကျလာ၊ ညချွေး ထွက်တာ၊ ကိုယ်ပူတာ၊ ဓါတ်မှန်၊ (အာလ်ထွာဆောင်း)၊ သွေးစစ်၊ သလိပ်စစ်၊ အသာစထုတ်စစ်။
ကလေးတွေမှာ တီဘီ အဖြစ်များကြတယ်။ ကလေးတောင် မဟုတ်ပါ။ မကြာသေးခင်က အရွယ်ကောင်း မိန်းကလေး နှစ်ယောက်မှာ လာတွေ့သေးတယ်။ တယောက်က ဓါတ်ပုံနဲ့ ပို့ပေးတယ်။ တယောက်က ဒီမှာတင်တွေ့တယ်။ တီဘီ ဖြစ်တာ ဆေးပါတ်လည်ရင် ပျောက်သွားပါတယ်။ တီဘီ အကျိတ်က မခွဲရတတ်ပါ။ ပိုးမရှိတော့ပေမဲ့ အကျိတ်က တော်တော်နဲ့ မပျောက်ရှိလဲ ကိစ္စမရှိပါ။ သက်သာလာတာနဲ့ လူက ဝလာမယ်။ စားလာမယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် တိုးတာဟာ ရောဂါအခြေအနေ ကောင်းလာတာကို ပြတယ်။
ငယ်ငယ်တုံးက နှာစေး၊ နှာရည်ယိုတာကနေ တီဘီပိုး၊ တခြားပိုးတွေ ဝင်လာခဲ့မယ်။ အဲဒီကနေ တက်စေ့ (လင့်ဖ်-နုတ်) တွေဆီ ရောက်လာတယ်။ အာသီးလဲ ရောင်မယ်။ တက်စေ့ရောင်တာမှာ အများကြီး လိုက်ရောင်တာနဲ့ နေရာကွက် ရောင်တာ နှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။
အကျိတ်က တဖြေးဖြေး ကြီးလာမယ်။ တချို့ကြက်ဥလောက် ရှိတယ်။ ရောင်တဲ့လက္ခဏာတွေရှိလာမယ်။ နီ-နာ-မာ-ပူ-ရောင်။ တချို့မှာ ပြည်တည်လာတယ်။ ပြည်အရောင် မတူတာတွေရှိနိုင်တယ်။
တချို့ ကလေး-လူငယ်တွေမှာ ဗိုက်ထဲက တက်စေ့မှာ လာဖြစ်ကြတယ်။ Tabes Mesenterica ခေါ်တယ်။ တချို့မှာ အူသိမ် တီဘီနဲ့ ရောနေတယ်။ ဗိုက်နာ-ဖျားလို့ စစ်ရင်းမှ တွေ့လာတတ်တယ်။ ဝမ်းပျက်တာ၊ အားယုတ်တာတွေလဲ ရှိမယ်။ အူတီဘီ ဖြစ်တဲ့သူရဲ့ ဗိုက်ကို သေသေခြာခြာစမ်းရင် ဂျုံနယ်နေရသလိုရှိတယ်။ မျက်တွင်းချိုင့်နေတတ်တယ်။ အသားအရေ ခြောက်မယ်။
တီဘီ အကျိတ်ရောင်သူတွေက သူများကို မကူးစက်ပါ။ သလိပ်ထဲ ပိုးတွေ့တာနဲ့ ရောနေရင်သာ သူများကို ကူးနိုင်တယ်။ တီဘီဆိုတာ ပိုးပါတဲ့ နွားနို့ကနေလဲ ကူးစက်လာနိုင်တယ်။ ကနေ့ခေတ်မှာ တီဘီ ဆေးတွေ အလွန်ထိရောက်ပါတယ်။ ၃ လ၊ ၆ လ၊ ၉ လ၊ ကုရပါတယ်။ Isoniazid, Rifampin, Pyrazinamide နဲ့ Ethambutol တွေက အသုံးများတယ်။ ဆေး အနည်းဆုံး ၂ မျိုးတွဲပေးတယ်။ တချို့ ၄ မျိုး တွဲပေးရတယ်။
လည်ပင်းအကျိတ်ကို မခွဲရတာ များပါတယ်။ ရုတ်တရက် သက်သာသွားတာမျိုးဟာ အကျိတ်အိတ်ထဲမှာ အရည် ရှိခဲ့ရာကနေ ခမ်းသွားလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆုပ်တီဘီကြောင့် ဒီမှာလာဖြစ်တာ ဟုတ်နိုင်သလို တခြားဟာလဲ ဖြစ်နိုင်သေးပါတယ်။ Biopsy အသားစ ထုတ်စစ်တာ မလုပ်ဘဲနဲ့ ဒီအကျိတ်ဟာ ဘာလို့ အတိအကျ ပြောမရပါ။ ကလေးကျန်းမာတာ ဝမ်းသားစရာပါ။